सलमानको फिल्म ‘राधे’ को ट्रेलर सार्वजनिक, ‘किस सिन’ दिएकै हुन त उनले? सलमान खानको बहुप्रतिक्षित फिल्म राधेको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। फिल्मको ट्रेलर हेर्दा एक्सनले भरिपूर्ण रहेको देखिन्छ। फिल्ममा सलमान पुलिसको भूमिकामा देखिएका छन्। मुम्बईका युवा ड्रग्सको नशामा फस्दै गएका र उनीहरुले घटाएका आपराधिक गतिविधि अन्त्य गर्न सलमान मुम्बई आउँछ आयोमेल संवाददाता
लुम्बिनी प्रदेश : नयाँ वर्षमा कहाँ घुम्ने, के हेर्ने?
नयाँ वर्षमा घुमफिर गर्ने चलन बढ्दो छ। घुम्नका लागि हामी नयाँ तथा आकर्षक गन्तव्य खोजिरहेका हुन्छौं। यस्तैमा एक हो लुम्बिनी प्रदेश। यहाँ थुप्रै घुम्न मिल्ने ठाउँहरु छन्। संसारभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्नसक्ने लुम्बिनीसहितका प्रमुख पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी प्रदेशभित्रै छन्। कृष्ण मल्ल
तीनजुरे घुम्न जुरेको नयाँ वर्ष (फोटो फिचर)
पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तथा पर्यटकीय क्षेत्र तीनजुरेमा नयाँ वर्ष २०७८ मा विशेष चहलपहल रह्यो। यो क्षेत्र गुराँसको राजधानीका रुपमा पनि परिचित छ। यहाँ सेतो, रातो, निलो, पहेँलोलगायत ३२ प्रकारका गुराँस पाइन्छ। राजेन्द्र गाैतम
'सेक्सपियरको आँगन' बाट बेलायत चियाउँदा
'सेक्सपियरको आँगन', यात्रा-निवन्ध संग्रह हो। यसको शीर्षकबाट नै यो यात्रा इंग्ल्यान्डको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने सेक्सपियर विश्वका एक महान साहित्यकार हुन् जसको जन्म इंग्ल्यान्डस्थित हेनले स्ट्रिट स्टार्टफोर्ड अपन एभन वरविकसायरमा भएको थियो। उनकै घरआँगनको तस्बिर पुस्तकको आवरण पृष्ठमा सजाइएको छ। आयोमेल संवाददाता
निमाको 'हेर्देउन मायाले' मा तक्मेबुढा र रजनीको रोमान्स (भिडियोसहित)
विल्सन विक्रम राई ( तक्मेबुढा ) र नायिका रजनी गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको 'हेर्देउन मायाले' बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। आयोमेल संवाददाता
फोटो नेपालमा बिस्का जात्राको अनलाइन प्रदर्शनी
नेपाल पर्यटन बोर्डले नियमित रुपमा आयोजना गरिरहेको ह्यास फोटोनेपाल (#photoNepal) प्रदर्शनीअन्तर्गत भक्तपुमा मनाइँदै आएको बिस्का जात्राको आकर्षण समावेश गरिएका फोटो प्रदर्शनी जात्रा मनाइने मितिमै मिल्ने गरी चैत २८ देखि वैशाख ५ सम्म हुने भएको छ। आयोमेल संवाददाता
सलमान खानको ‘राधे’ मा कोरोनाको ग्रहण : अर्को वर्षका लागि सर्नसक्छ प्रदर्शन मिति
भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि विभिन्न राज्यहरुमा आंशिक लकडाउन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी ईद अर्थात मे १३ मा रिलिजको तयारीमा रहेको सलमान खानको फिल्म राधे पनि संकटमा परेको छ। खानले पनि अवस्था यस्तै रहिरहे फिल्म रिलिज नहुने संकेत गरिसकेका छन्। आयोमेल संवाददाता
साेनाको ‘मेरो माया करोडमा’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा टिकटक च्यालेन्ज पनि घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक गीतको उत्कृष्ट टिकटक बनाउनेमध्ये तेस्रोलाई १० हजार, दोस्रोलाई २० हजार नगदसँगै मोबाइल फोन र पहिलो हुनेलाई ५० हजार नगदसँगै मोबाइल फोन दिइने घोषणा गरिएको छ। आयोमेल संवाददाता
कोरोना संक्रमित भएका बलिउड नायक अक्षयकुमार अस्पताल भर्ना
कोरोना संक्रमित भएका बलिउड नायक अक्षयकुमार अस्पताल भर्ना भएका छन्। गत आइतबार आफू संक्रमित भएको जानकारी दिएका अक्षयलाई आज स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको बताइएको छ। आयोमेल संवाददाता
तेस्रो आइएमई टेनिस प्रतियोगिताकाे उपाधि अकि र सर्भानीलाई
तेस्रो आईएमई जेटिआई ग्रान्ड जुनियर खुला टेनिस प्रतियोगिताअन्तर्गत यु–१६ तर्फको उपाधि अकि जुविन राउत र सर्भानी श्रेष्ठले जितेका छन्। काठमाडौं मन्डिखाटारस्थित टेनिस कोर्टमा आइतबार सम्पन्न यु–१६ ब्वाइजतर्फको फाइनल स्पर्धामा राउतले आरभ सम्राट हाडा र गर्ल्स यु–१६ तर्फकै स्पर्धामा श्रेष्ठले रैना शाहलाई हराएका हुन्मा। आयोमेल संवाददाता
'निलो कुर्ताले' को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
गायिका मेलिना राई र गायक लोक पौडेलको युगल गायनमा समावेश 'निलो कुर्ताले' बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। डान्सिङ शैलीको यस गीतमा शब्द र संगीत दिपक शर्माको रहेको छ। गीतलाई नरेन्द्र वियोगीले संगीत संयोजन गरेका हुन्। आयोमेल संवाददाता
रेडियो नेपालकाे ७० वर्ष लामाे यात्रा
राजनीतिक परिवर्तनको आरोह-अवरोह पार गर्दै झन्डै ५० वर्ष एकछत्र रेडियो सेवा दिए पनि २०५४ सालमा अन्य एफएम स्टेसन स्थापना भएपछि भने रेडियाे नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने चुनौती थपिएको थियो। हाल ६ सय ५० भन्दाबढी रेडियोसँग यसले खरोरूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। आयोमेल संवाददाता
रणवीरपछि आलियामा पनि देखियो कोरोना संक्रमण
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमले आलियालाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्। बिग बोसकी एक्ट्रेस मोनालिसालाई पनि संक्रमण देखिएको छ। उनका पति विक्रान्त सिंह राजपुतले यसको पुष्टि गरेका छन्। आयोमेल संवाददाता
केबिएले ‘कुमारी बैंक कर्पोरेट ब्याडमिन्टन’ आयोजना गर्ने
काठमाडौं ब्याडमिन्टन एकेडेमी (केबिए) ले आगामी जेठ २० देखि २२ सम्म ‘कुमारी बैंक काठमाडौं टिम च्याम्पियनसिप २०२१–कर्पोरेट ब्याडमिन्टन (आमन्त्रण)’ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। आयोमेल संवाददाता
प्रविण र अनिशा बने मोडल हन्ट नेपाल सिजन ६ का विजेता
नेक्स्ट मोडल्स नेपालले आयोजना गरेको ‘मोडल हन्ट नेपाल सिजन ६’ उपाधि प्रविण चापागाईं र अनिशा शाक्यले जितेका छन्। सहभागिता, प्रस्तुतिकरण र चर्चाका दृष्टिले नेपाली परिवेशमा लोकप्रिय मोडलिङ प्रतियोगितामा ३४ युवा तथा ३२ युवतीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। आयोमेल संवाददाता
रहेनन् ‘बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर...’ का सर्जक
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चिनाउन सफल सबैको जनजिब्रोमा बसेको ‘बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर, किरेमिरे जालेरुमाल...’ बोलको गीतका सर्जक तथा गायक टीकाबहादुर श्रेष्ठको निधन भएको छ। आयोमेल संवाददाता
आमिर खानलाई कोरोना संक्रमण
भारतीय चर्चित अभिनेता आमिर खानलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। उनका सहयोगीले दिएको जानकारी अनुसार कोरोनाका लक्षण देखिएपछि गराइएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आयोमेल संवाददाता